▷ AWS chọrọ ikwe ka ụlọ ọrụ niile mepụta netwọkụ 5G nke ha - 【Ntụnyere】 2022
AWS chọrọ ikwe ka ụlọ ọrụ niile mepụta netwọk 5G nke ha
Ntụziaka Ọmụmụ Architect Ngwọta AWS, 3E-Associate SAA-C02 (Ngwọta Asambodo Aws ...
Piper, Ben (Onye edemede)
Ịkwalite azụmahịa gị na 5G ga-adị mfe n'oge na-adịghị anya site na ọkwa ọhụrụ sitere na Amazon Web Services (AWS).
Ụlọ ọrụ ahụ webatara AWS Private 5G, ọrụ ọhụrụ a na-achịkwa nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịmepụta na ọnụ ọgụgụ netwọk ekwentị 5G nkeonwe na ụlọ ha n'ime ụbọchị kama ọnwa.
AWS na-ekwu na site na ịpị ole na ole, ndị ahịa nwere ike ịkọwapụta ebe netwọk, ụdị ikike ha chọrọ, wee nweta ihe niile ha chọrọ; Usoro ahụ na-ewe nanị ụbọchị ole na ole kama ọnwa ole na ole ka ọ na-adịbu. .
"Ihe ijuanya dị mfe"
"Onweghị ihe dị ka netwọkụ AWS Private 5G," AWS CEO Adam Selipsky kwuru, na-ewepụta onyinye ọhụrụ na ụlọ ọrụ re: Mepụta ihe omume 2021 na Las Vegas.
Ọ gbakwụnyere, "Ị na-enweta uru niile nke teknụzụ mkpanaka na-enweghị ihe mgbu nke ogologo usoro nhazi ogologo oge, njikọta mgbagwoju anya, na ọnụ ahịa dị elu," ka ọ gbakwụnyere.
Ozugbo enwetara arịrịọ niile, AWS ga-enye gị ihe niile ịchọrọ, ma ọ bụ ngwaike ma ọ bụ ngwanrọ, ọbụlagodi kaadị SIM maka ngwaọrụ mkpanaka.
AWS na-ekwu na ọ nweghị ụgwọ dị n'ihu ma ọ bụ ụgwọ ngwaọrụ metụtara ikpo okwu ọhụrụ, na ndị ahịa na-akwụ ụgwọ maka ikike netwọk na arụmọrụ ha rịọrọ.
Nhazi netwọk niile na ntinye aka na-akpaghị aka, na ikpo okwu nwere ike ịba ụba dịka ọ dị mkpa, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na onye ahịa kwesịrị ịkwado ngwaọrụ ndị ọzọ na ụbara okporo ụzọ netwọk.
A na-enye AWS Private 5G naanị ndị ahịa nọ na US n'oge a, mana enwere ike gbasaa na ahịa ndị ọzọ n'oge adịghị anya.
"Ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị chọrọ iji ike nke 5G guzobe netwọk nke onwe ha na ụlọ, ma ha na-agwa anyị na ụzọ dị ugbu a na-eme ka ịtọlite ​​​​na ibuga netwọk nzuzo na-ewe oge, siri ike na ọnụ," David kwuru. Brown, osote onye isi oche nke EC2 na AWS.
"Site na AWS Private 5G, anyị na-agbatị akụrụngwa ngwakọ na netwọkụ 5G nke ndị ahịa ka ịtọlite ​​​​netwọọdụ 5G nkeonwe dị mfe, ngwa ngwa na ọnụ ala. Ndị ahịa nwere ike ịmalite obere na ọnụ ọgụgụ achọrọ, kwụọ ụgwọ ka ị na-aga, wee nyochaa ma jikwaa netwọk ha site na njikwa AWS.